UBUNGAKANANI BEPHULI YOKUDADA (UBUNGAKANANI KUNYE NESIKHOKELO SOYILO) - AMACHIBI OKUDADA
Eyona amachibi Okudada Ubungakanani bePhuli yokuDada (Ubungakanani kunye nesikhokelo soYilo)
Ubungakanani bePhuli yokuDada (Ubungakanani kunye nesikhokelo soYilo)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kubungakanani beephuli zokudada ezibandakanya ubukhulu be-inground, ngaphezulu komhlaba, ithanga, ukuntywila, uyilo lweephuli ezingapheliyo kunye ne-l Amachibi okudada zizinto ezininzi ezinokufakwa ekhayeni lakho. Zingasetyenziselwa yonke into ukusuka ekudadeni kosapho ukuya kumaqela okudada kunye nakwimizamo yokomelela komzimba kubandakanya yonke into ukusuka ekusebenzeni ngokungaqhelekanga ukuya kuqeqesho oluqatha.
Nangona kunjalo, zininzi izinto ocinga ukuba kufuneka uzenze ngaphambi kokuzibophelela kulungiso lwasekhaya okanye ukuthenga iphuli.
Enye yezona zinto zisisiseko ekufuneka uziqwalasele kukuba ungakanani indawo onayo echibini. Oku kuya kukunceda uthathe isigqibo kungekuphela ukuba unokuba nephuli kwipropathi yakho kodwa udidi lwedama elinokulingana iimfuno zakho zobungakanani kunye nento oyifunayo echibini lakho.
ilokhwe yomtshato ebomvu negolide
Ubungakanani bePhuli yokuDada
Imilinganiselo yePhuli yePhuli
Ngaphezulu kobungakanani bePhuli yokuDada
Imilenze Pool Imilinganiselo
Baphosa Imilinganiselo yePhuli
Imilinganiselo yePhuli yeOlimpiki
Imilinganiselo yePhuli yeL
Imilinganiselo echibi elincinci
Yintoni Ubungakanani obuPhezulu bePhuli yokuDada?
Yintoni Ubunzulu bePhuli yokuDada?
Xa kufikwa kubungakanani beephuli zokudada, zininzi izinto ekufuneka ziqwalaselwe. Oku kubandakanya iikhonsepthi ezinje ngokuba uluhlobo luni lwamachibi owafakileyo, umbandela okwenziwe kuwo ichibi, kunye nokumila kwephuli.
Ngokubanzi, ubungakanani bephuli yokudada imelwe yimilinganiselo emibini - ubude nobubanzi. Amanani amiselwe ngumlinganiselo we-2-to-1 othelekiswa nobungakanani beyadi yangasemva efakwe ngaphakathi kumadanyana. Ngenxa yezi zinto, ubukhulu beephuli zokudada ziwela malunga nemilinganiselo emithathu ephambili:
Iinyawo ezili-16 ngeenyawo ezingama-32
Iinyawo ezili-15 ngeenyawo ezingama-36
Iinyawo ezingama-20 ngeenyawo ezingama-40
Ukuba ufuna ukwenza ubume beephuli zokubhukuda ngasemva ukusuka ekuqaleni zininzi ezahlukeneyo isoftware yoyilo lwedama iinkqubo ezinokunceda.
Ngale nkqubo unokufaka imilinganiselo yakho yangasemva kwendlu kwaye uyile kwaye ubenombono wephuli yakho kwaye ungeze izinto ezinje ngeepaki kunye neepatios.
Amachibi angqonge indawo ahlala exatyiswa ngokusisigxina kunye nembonakalo yawo ecocekileyo. Ubungakanani bephuli engqonge umhlaba, kwi-avareji, ihlala ixhomekeke kakhulu kwizinto ezenziweyo.
Kumachibi e-vinyl, kukho izinto ezintathu eziphambili ezithi ziqwalaselwe ngabantu zihlala zii-16 ezinyaweni ezingama-32, iinyawo ezili-18 ngeenyawo ezingama-36, kunye neenyawo ezingama-20 ngeenyawo ezingama-40. Kwezi milo zixande, i-16 iinyawo ngeenyawo ezingama-32 lolona khetho luqhelekileyo.
Amachibi ahambelanayo, kwelinye icala, ahlala enesimo sezintso kunokuma okweqanda. Ubungakanani obudume kakhulu kula machibi ziinyawo ezili-16 ngeenyawo ezingama-32.
Okokugqibela, kukho amachibi e-fiberglass ahlala enefomathi yasimahla. La madanyana ahlala ubukhulu becala kufikelela kwii-12 iinyawo ngeenyawo ezingama-24.
Ngaphezulu kwamachibi okudada emhlabeni anenzuzo yofakelo olulula kuba ayifuni nakuphi na ukumba eyadini yakho. Oku kwenza ukuba kube lula ukususa ukuba ufuna ichibi lisuswe emva kofakelo.
Ngaphezulu kwamachibi okudada emhlabeni angena malunga nobukhulu obuthathu. Oku kubandakanya icala elincinci kumndilili, ngaphezulu kwephuli yomhlaba yeenyawo ezingama-21 ngeenyawo ezingama-52.
Kwiphuli enkulu engaphezulu komhlaba, i-oval enemilinganiselo ye-15 yeenyawo ngeenyawo ezingama-30 ngeenyawo ezingama-52 iqhelekile. Ubungakanani obudume kakhulu, nangona kunjalo, yimilo ejikelezileyo enobukhulu beenyawo ezingama-24 ngeenyawo ezingama-52. Ubungakanani obudumileyo buxabisa i-1, 000 yeedola.
Iphuli, njengoko igama lisitsho, yakhiwe ukwenzela ukuba umsebenzisi okanye abasebenzisi bakwazi ukudada kakuhle kuyo. Nangona kunjalo, ayinabanzi ngokwaneleyo ukuba ivumele igumbi elifanayo lokubhukuda lijikeleze njengechibi losapho elijikelezayo. Ke, imilo yamachibi emilenze ihlala inde kwaye imxinwa ukuphendula ngoku.
Indawo yokuqubha enobungcali inkulu kakhulu kuneyona ndawo iphakathi yokuthambisa eya kulunga kwindawo yokuhlala. Amachibi obuchwephesha oqeqeshiweyo anobude obumalunga neenyawo ezingama-82 okanye iimitha ezingama-25. Kude kude nendawo yokuzivocavoca, nangona kunjalo, amachibi angama-40 eenyawo ubude athathelwa ingqalelo njengeephuli zamachibi ngokunjalo.
Iphuli yokuntywila yenzelwa ukuba ibe nzulu kodwa ayinyanzelekanga ukuba izinikele kwezinye iimfuno ezininzi. Endaweni yoko, bahlala bechazwa ngokusetyenziswa kwabo.
Amachibi okuntywila asetyenziswa emazantsi okuhamba kwamanzi okanye, ngakumbi ngobungcali, kwakuthetha ukuba kugcinwe kubanda ukulandela ukusetyenziswa kwesauna okanye ibhafu eshushu. Nokuba yeyiphi na indlela, banokuba nzulu ngokwaneleyo ukuba bangafaka wonke umzimba ngaphakathi.
Ubungakanani obuqhelekileyo bepaki yokuntywila imalunga neenyawo ezisixhenxe ngeenyawo ezili-12. Ngokubhekisele kubunzulu, olona khetho luqhelekileyo echibini lokuntywila luluhlu lwama-intshi ama-54-60 ubunzulu.
Amachibi okudada eOlimpiki aqinile ngakumbi kubukhulu bawo. Kungenxa yokuba zenziwe ukuba zilungele iimfuno zokubamba ukhuphiswano lwamanye amazwe.
Ngamanye amagama, la madanyana azakulingana nobukhulu obuya kubona xa ubukele iMidlalo yeOlimpiki. Oku kukwathetha ukuba bathathelwa ingqalelo ikakhulu njengotyalo mali lwentengiso - uninzi lweentsapho aludingi ndawo ingako.
Iphuli yokudada enobungakanani beOlimpiki kufuneka ubuncinci ibe ziimitha ezingama-50 ubude kunye nobubanzi beendlela ezili-10. Ukongeza, zihlala ubuncinci ubuncinci ziimitha ezimbini ubuncinci kwaye zibambe okungenani i-500,000 yeelitha zamanzi nangona zinokubamba ukuya kuthi ga kwi-660,000 yeelitha ngokunjalo.
Amachibi angapheliyo yinto enomdla ehamba ngaphezulu nangaphezulu kwephuli yasemva kwendlu. La madama enziwe ikakhulu ukuze asetyenziselwe umthambo kwaye eneneni anangoku.
Umsebenzisi wenzelwe ukuba adade ngokuchasene nemeko yangoku, ihlala ihlala endaweni yayo, inike ichibi inkohliso yokungapheli.
Ngaphandle kwegama, iiphuli ezingapheliyo zisebenzisa le nkohliso ukugcina indawo. Ke, awudingi ukuba nexhala malunga nobukhulu obukhulu ukubandakanya iphuli engapheliyo kwipropathi yakho.
Umama ka-boho kamyeni unxiba ihlobo
Ubungakanani obulinganiselweyo be-spool engapheliyo kuphela ubuncinci malunga neenyawo ezili-9 ngeenyawo ezili-15, kunye nobukhulu obukhulu obukhoyo.
Amachibi amilise u-L yile nto avakala ngayo. Njengoko igama libonisa, bakwimo efanayo nonobumba L. Beka enye indlela, ichibi lenza i-engile elungileyo.
Obu bume buhlala buvumela umniniyo ukuba enze umahluko ocacileyo phakathi kwezona nzulu kunye nezona nzulu ziphezulu zephuli kunokuba ithambeka elingaphantsi.
Imilinganiselo yeli chibi ilinganiswa kancinci ngokwahlukileyo kunemilinganiselo emibini ecacileyo njengamanye amachibi.
Elona cala lide lechibi lidla ngokulinganisa phakathi kweenyawo ezingama-38 kunye neenyawo ezingama-44, elona cala lifutshane lidla ngokulinganisa phakathi kweenyawo ezili-16 ukuya kwii-20 iinyawo. Okokugqibela, icala elenza isiseko se-L lihlala liphakathi kwe-24 ukuya kwi-26 yeenyawo.
Ukuba ufuna okanye unegumbi le iphuli encinci , usenokuzibuza ukuba incinci kangakanani loo nto.
ubungakanani begaraji yemoto enye
Ngokubanzi, i-avareji yamachibi amancinci athathelwa ingqalelo njengechibi elinama-square angama-600 eenyawo okanye ngaphantsi. Oku kushiya igumbi lokuba ulungelelanise eso sithuba kuhlobo lwephuli oyifunayo.
Xa ufuna iphuli enkulu ngokwaneleyo ukuba usapho lwakho lungadada kulo, mhlawumbi nabahlobo abambalwa, kukho ubungakanani obuthembekileyo.
Olona khetho luqhelekileyo kubungakanani beephuli zokubhukuda yiphuli eneenyawo ezili-18 ngeenyawo ezingama-36. Oku kuyakunika indawo eyoneleyo yokuqubha kwaye udlale imidlalo ngaphandle kwabantu abasibhozo kuyo abaxineneyo ngokusondeleleneyo. Oku kuhlala kunconywa kumachibi oxande.
Ungayibona igalari yethu ye iimilo zokuqubha ukufumana ezinye izimvo apha.
Ubunzulu bephuli yokubhukuda buncinci kunobungakanani. Emva kwayo yonke loo nto, ubunzulu abunazo izithintelo ezifanayo kububanzi nobude, njengobungakanani bepropathi efakwe kuyo ichibi.
Nangona kunjalo, kusekho umgangatho othile, ukuya kubunzulu bamachibi. Iqula eliphakathi losapho lithe tyaba, lilinika ubunzulu beenyawo ezintathu kwisiphelo esincinci sedama kunye neenyawo ezintandathu ubunzulu kwindawo enzulu.
Kwelinye icala, ukuba ichibi lisetyenziselwa ikakhulu ukuqubha okanye ukuzilolonga, ungayifaka ngobunzulu obufanayo beenyawo ezine ukuya kwezintlanu.
I-dress dress maxi yomtshato
umtshato waselwandle kuhlahlo-lwabiwo mali
Utshintsha njani ngokusemthethweni igama lakho eGeorgia
Amakhonkco epinki kuye
yintoni isandla somnwe
igama liguquka malini